Imigodi yefu eneHashflare | Iinkonzo, i-cons kunye nendlela yokuqesha | I-CryptoLog
Imigodi yefu kunye neHashflare
Ukusebenza emgodini akuyiyo le nto ibiyiyo: ukusebenza nzima, uthuli, ukubila, iingxaki zemiphunga ... hayi, ewe, akunjalo. Inkulungwane yama-XNUMX iwuguqule phantsi lo mbono. Ngoku xa sithetha ngokumbiwa kwemigodi sicinga ngakumbi ngee-cryptocurrensets kunamalahle okanye iidayimani. Kwaye oku kungenxa yokuba into ekhutshwayo kukumbiwa kwemigodi yile yegolide ingaphathekiyo kodwa enexabiso elilinganayo (kwiimeko ezininzi) ezabelwe imali ye-elektroniki.
Ingcamango entsha yezemigodi
Xa i-Bitcoin yayilelwe, yenziwa ngohlobo lokuba iiyunithi ezizizigidi ezingama-21 eziza kubakho ziyenziwa ngenxa yomsebenzi weekhompyuter. Oku kungenxa yolwakhiwo lwe-blockchain okanye iBlockchain kunye nendlela ekuvunyelwene ngayo ukuba iimali ezintsha zenziwe. Iibhloko nganye zeli khonkco zibakho xa oomatshini beza nesisombululo kwingxaki ye-cryptographic eyandayo. Ngaphezulu okanye ngaphantsi, umatshini ozinikele kwimigodi yeBitcoin (okanye enye i-cryptocurrency esekwe kwiprothokholi efanayo okanye efanayo), yenza ibhloko xa ifumana, ngokusekwe kwizisombululo zovavanyo, isiphumo ngqo somtya wabalinganiswa be-cryptographic. Ke bonke abanye abasebenzi-mgodini bajonge ukuba yonke into ichanekile kwaye umatshini osombulule le ngxaki ukhuphe ibhloko. Kwaye iqulethe iBitcoin, ethi, okwangoku, ibengu-12,5 ngokuchanekileyo. Ixesha elingaphezulu, ingxaki iya isiba nzima ngakumbi, kwaye iyakuthatha amandla ekhompyuter nangaphezulu ukufumana isisombululo malunga nemizuzu eli-10. Kwaye, amaxesha ngamaxesha, inani leBitcoin elenziwa kwibloko nganye emigodini lincinci. Oku kuthetha ukuba amandla afunekayo kwimigodi yeBitcoin nayo iyanda kwaye ifuna oomatshini abanamandla ngakumbi.
Ke ukumbiwa kwemigodi akunakuthelekiswa noko kwenziwa ngabantu basemgodini ngokwenene. Kodwa, ukuba ufuna ukujonga icala elingezantsi, imigodi ye-cryptocurrency ayikho ngaphandle kwengxolo, ubushushu nothuli kuba oomatshini abazinikele kuyo kufuneka basebenze ngokupheleleyo.
Apho kukho ukucaphuka kukwakho namathuba okwenza iinkonzo. Isiphumo sendalo kukuba umntu athi: Kuthekani ukuba ndingabeka indawo yokugcina izinto egcwele oomatshini abanamandla abazinikele kwimigodi kwaye ndinika abantu ithuba lokuqesha amandla abawafunayo? Le yindlela yokuzalwa kwemigodi yelifu. Kwikhompyuter yakho, ucocekile, utyala imali koomatshini abathile ongababoniyo kodwa abasebenzela wena kwaye bakunika ukusebenza kwalo msebenzi.
IHashFlare yinkampani ebonelela ngeenkonzo zemigodi efini. Kwenza kube lula kuye nabani na ukuba afumane i-cryptocurrensets ngaphandle kokwenza utyalomali olukhulu, ngaphandle kwesidingo solwazi olukhulu lobuchwephesha, ngaphandle kokukhathazeka ngokulondolozwa nokulungiswa kwezixhobo kwaye, ewe, ngaphandle kwengxolo, ubushushu nothuli abazivelisayo. Ucocekile. Kwilifu.
IHashflare yasekwa nguSergei Potapenko kwi2014 kwaye ibekwe eTallinn, e-Estonia. Lilizwe elinamaxabiso nge-Kw / h nganye yamandla ombane ombane afanelekileyo xa kuthelekiswa namanye amazwe amaninzi kwi-European Union, ngokungathandabuzekiyo enomdla.
Isebenza njani iHashFlare
Olona phawu luphambili kukuba abathengi beHashFlare akufuneki ukuba bathenge izixhobo ezigcweleyo kodwa banokuqesha amandla abawifunayo nangaliphi na ixesha kwaye bonyuse nanjengoko benqwenela, bade baphinde bafumane inzuzo abayifumeneyo. Yonke into yenziwa ngendlela elula kwaye enobuchule ngokusebenzisa ipaneli yokulawula ekulula ukuyiqonda eguqulelwe kwiilwimi ezininzi, kubandakanya iSpanish. Ezi, mhlawumbi, zezona mpawu ziphambili zeHashFlare: ukuqesha amandla, hayi izixhobo kunye nokwenza ipaneli yokulawula entle kakhulu.
Ngokubhalisa ungathenga into oyithandayo phakathi kweendlela ezininzi onokukhetha kuzo I-Bitcoin, i-Ethereum, iZcash okanye iDash.
Izivumelwano zezonyaka omnye, ke uya kukhetha amandla okuqala ofuna ukwenza isivumelwano kwaye uya kuhlawula kwangoko iinyanga ezili-12.
Emva kwexesha, kwiphaneli yokulawula, unokonyusa amandla ekuvunyelwene ngawo okanye ukhethe ukubuyisela inzuzo kwi-hashrate engaphezulu.
Xa kufikwa ekuhlawuleni kukho iindlela ezahlukeneyo. Ungahlawula kwiBitcoin okanye ngokudlulisa ibhanki kunye nabanye kubandakanya ukuhlawula imali eseleyo oyifumeneyo ngokumbiwa kwemigodi.
Yima, kutheni le nto iHashflare ingezimbiwa?
Umbuzo olungileyo. Ngabo bonke oomatshini abasebenza iiyure ezingama-24, unokucinga ukuba baya kufumana ngaphezulu xa begcina yonke iBitcoin (okanye i-Ether, iZcash okanye iDash) evelisiweyo. Ewe akunjalo. Yimodeli yeshishini kwaye, njengawo onke amashishini, kufuneka babe ziimodeli ezinakho ukuqinisekisa ngenzuzo enokuqikelelwa. Oko kukuthi, ishishini kufuneka linike izibonelelo kwaye ezi azinakho okanye akufuneki ziguquke okanye zitshintshe. Ukuba unoomatshini kwaye uyabrenta, kufuneka ujolise ekufumaneni abathengi. Zonke ezinye izinto esiza kubona emva kwexesha elincinci mazingabinampembelelo. IHashflare ikunika izixhobo kunye nenkonzo. Ukuba umgodi ungaphezulu okanye ungaphantsi okanye ixabiso lento eyam iyenyuka okanye isezantsi ayizichaphazeli. Kwanele ukugcina inani elaneleyo labathengi ukuba bahlale koomatshini bakho kwaye babagcine bekwimeko efanelekileyo. Ngokunyuka okubonakalayo komdla kwii-cryptocurrensets, baninzi abathengi abanokubakho. Kwelinye icala, abaxumi bangoku banokuguqulwa babe zezona ndlela zibalaseleyo zentengiso ukuba, ukongeza, ubabonelela ngekhomishini yomthengi ngamnye omtsha oqesha iinkonzo ngokudibanisa amakhonkco. Kungenxa yoko le nto uya kubona amanqaku amaninzi kwiibhloko ezininzi ezahlukeneyo malunga neHashflare. KwiCriptoblog, ubuncinci, sikuxelela yonke into ekhoyo: intle kwaye incinci intle ukuze ungazi kuphela okungakumbi kodwa ukhethe kwisazela kwaye ngesiseko yonke into ofuna ukuyenza kweli hlabathi linomdla wokugcina kunye nokumbiwa kwemigodi. ilifu ngokukodwa.
Ke uHashflare uyakuhlala esenza inzuzo ukuba nje iyaqhubeka nokuba nabathengi abatsha, gcina abo bonwabile okanye bonwabile kwaye ngaphezulu kwako konke bengabaleki bathethe kakubi. Engahlali ilula, ngendlela.
Hambisa isantya sakho kumachibi ahlukeneyo
Amachibi ngamaqela abasebenzi basezimayini abasebenzisanayo ukubonelela ngombane wekhompyuter okanye i-hashrate kwaye emva koko inzuzo ihanjiswa ngokulinganayo.
Ngokuqinisekileyo kuyinzuzo ukuba IHashflare ikuvumela ukuba ukhethe amachibi apho ufuna ukudibanisa khona amandla akho kwisivumelwano. Ezinye iinkonzo zemigodi yefu aziboneleli ngolu khetho.
Oku kunokwenza umahluko obonakalayo kwimivuzo yakho kwaye yinto onokujonga ngokulula kuyo iphaneli yokulawula kwaye uyiguqule ngokuthe ngcembe ukuba ibe yeyiphi eyona indibaniselwano ifanelekileyo. Unakho ukuqhagamshela echibini okanye kwindawo ezininzi kwaye uqwalasele inani le-hashrate yakho oya kuthi ube negalelo kuyo nganye.
Ngokubanzi, Awona machibi makhulu, ngokwethiyori, anokufumana iibhloksi rhoqo nangona kufuneka ahambise inzuzo phakathi kwabantu abaninzi. Imvakalelo (kwaye nditsho ukuba ndiziva kuba izinto apha zingaxhomekeka kwizinto ezininzi eziguqukayo) kukuba ngamachibi amakhulu kunenzuzo ethe kratya. Kodwa konke kungumcimbi wovavanyo. Gcina ukhumbula ukuba ichibi eli lihlala lifaka iikhomishini (umrhumo wephuli) ngohlobo lwepesenti yeenzuzo ezihambelana nawe. Yile nto ifunyanwa ngabanini bamachibi. Ayisiyonto ininzi kuba ihamba phakathi kwe-1% kunye ne-3% kodwa yiparameter ekufuneka ithathelwe ingqalelo.
Kwelinye icala, ubungakanani kunye nokusebenza kwala machibi kuyahluka ngokuchanekileyo kuba, njengawe, abathathi-nxaxheba banokutshintsha ukusuka komnye baye komnye njengoko bebona kufanelekile. Kwiinyanga ezidlulileyo amachibi ama-5 amakhulu nge-hashrate kunye nenani leebhloko ezombiwa sele:
ichibi iibhloko Ipesenti yetotali
I-BTC.TOP 3,592 12.73%
I-F2Pool 2,017 7.15%
Kuyacetyiswa ukuba uqale ngenye okanye ezingaphezulu kwezi, ezona zinkulu kwaye, kuyo nayiphi na imeko, uqokelele ulwazi kulowo nalowo kubo. Kukulungele, njengoko ungalindela ukunxibelelana namachibi asebenza ngokufanelekileyo kwaye ngaphandle kwamathandabuzo ngokunyaniseka kwakho.
Kulungile, nantsi indawo inomdla ngakumbi. Uya kuqesha inkonzo yonyaka kodwa akukho siqinisekiso sokuba uya kuba sisityebi. Ngaphandle kwento yokuba uza kuphumelela into. Nangona inokuba ngokuchaseneyo. Inomdla ngokwaneleyo, akunjalo? Kulungile, yonke into ifanelekile ukuba ichazwe.
Izinto ezibandakanyekileyo emngciphekweni zininzi kodwa, ngokwendalo, ukuba ufuna ukwenza ezinye zeyona mali ifunekayo, olona khetho luphambili kwezi zilandelayo:
Ukuthenga izixhobo ezibiza imali eninzi kwaye ukulungele ukuzigcina ziqhuba iiyure ezingama-24 kunye nazo zonke izinto ezicaphukisayo kunye nokunyamezela ukubona amatyala ombane obunzima ngakumbi.
Thenga ikhompyuter kwaye uqeshe indawo kwiziko ledatha eligcina lisebenza iiyure ezingama-24 kwaye uwele iminwe yakho ukuze ingonakali.
Qasha amandla owafunayo kwinkonzo yemigodi yefu njengoHashflare.
Ukusuka apha, izinto eziguquguqukayo:
Kuxhomekeke kwi iphuli okanye ii-pooles onxibelelana nazo Amandla akho okanye ukungxama uya kuba nenhlanhla engaphezulu okanye encinci. Kunzima ukuqikelela ukuba yeyiphi indibaniselwano eya kuba ngcono okoko nje imigodi inenxalenye yamathuba kodwa nokubala okunokwenzeka. Njengoko benditshilo, into kukuzama ukudityaniswa. Konke oku kucinga ukuba iphuli oyidibanisayo nayo isebenza elubala kunye nokunyaniseka okuphezulu.
A amandla aphezulu anekhontrakthi, kunokwenzeka ngakumbi kwiibhloko zam. Sele ndikuxelele kwasekuqaleni, ngamandla amancinci uya kudikwa. Ukongeza, amandla amaninzi, utyalo-mali lokuqala ngakumbi.
Eyona ibalulekileyo: Ixabiso lee-cryptocurrensets liguquguqukayo kakhulu. Ungalinda, kodwa akukho mntu unokukuqinisekisa, ukuba ixabiso lalo liya kunyuka kuwo wonke unyaka wesivumelwano sakho. Kwanele ukubona ukuba kwenzeka ntoni ngoku ngokuwa okukhulu sele kunjalo, ngokusebenzayo, ingxaki enzulu.
Ukuba sithathela ingqalelo oku kungasentla kwaye, ngakumbi, umahluko wesithathu, asinakuthi ukutyala imali kwimigodi yefu kuzakuba lutyalo-mali oluzolileyo.
Masizame ukwenza ubalo olunzima ukusuka kwimeko yangoku. Ukuba, emva kokubhala eli nqaku, iBitcoin iphinda iphinde iphinde iphinde ifike kwi-euro ezingama-20.000, izinto ziyatshintsha. Kodwa ikamva asiyondlela apho ubona uloliwe esiza mgama.
Sele ndilindele ukuba ukuba uqesha ubuncinci, njengoko kubonakala kwiwebhusayithi yeHashflare, ungafumana inzuzo encinci kwimeko ezilungileyo. Ukuba kukho nantoni na, iidola ezimbalwa ekupheleni konyaka, kunye nemirhumo yesondlo isaphulelo. Esi sesinye sezithembiso sikaHashflare sokumba umgodi kwiBitcoin ngokwemigaqo yayo emincinci:
AMAMANDLA AMAZIMBI SHA-256
Ubuncinci be-hashrate: 10 GH / s
Imali yesondlo: $ 0.0035 / 10 GH / s / 24h
Iqela: HashCoins SHA-256
Iirhafu ezizenzekelayo kwi-BTC
Isivumelwano sonyaka omnye
$ 1.20 nge-10 GH / s
Ke ngoko, utyalo-mali lwakho lokuqala kuya kufuneka lube lukhulu kakhulu ukuba ufuna ukwenza into apha.
Masithi ndenza isivumelwano nge-1 TH / s eya kundibiza malunga ne-1400 ye-euro ngonyaka omnye. Masithi ixabiso leBitcoin lihlala lijikeleze oko likuko ngoku kwaye ndiyilungiselela inkqubo yokubuyisela inzuzo kwi-hashrate engaphezulu. Ndiqikelela ukuba, kuthintelwa impazamo okanye ukushiywa, ukuba unokwenza inzuzo nge-70 yeedola ngenyanga. Kwaye uya kuwuphelisa unyaka hayi nge-10 kodwa nge-11 okanye nge-12 TH / s.
Kodwa xa ndithetha ngenzuzo epheleleyo ndihlala ndicinga ngokubuyela kutyalo-mali nakwikhomishini yolondolozo ukuba, khumbula, yi- $ 0,0035 ngosuku kwaye ngayo yonke i-10 GH / s, emele inani elinomdla kakhulu kwinkampani kwaye hayi kakhulu kuwe kuba iya kuba sesinye sezizathu zokuba inzuzo yakho yokugqibela ingaphantsi kakhulu .
Kwimeko yangaphambili bendikhe ndazigcina okoko ukususela ngoku eyona nto iphambili lixabiso ledigital cryptocurrency. Akunakulindeleka ukuba ihlale injalo ngoku. Ndiza kuba nethemba kwaye ndicinge ukuba i-Bitcoin kulo nyaka izonyuka ngokonwaba. Andazi, masithi inyuka iye kwi-25.000 euro. Kuxhomekeka ekubeni uyenza ngokukhawuleza kangakanani, engafaniyo nasekuqaleni kwekhontrakthi yethu kunasekupheleni kodwa, ke, masibe ukubala ngovuyo. Ndizakuqala ngokufanayo nakudala kwaye ndiphinde ndityhale imali ukuze ndifumane isantya esiphezulu. Ndiza kuwugqiba unyaka wokuqala ngendlela efanayo malunga nezibonelelo (kuba ndiyibuyisile inzuzo) kodwa ngoku ngokuqinisekileyo ndiza kuba ne-20 okanye i-30 TH / s yokuba, kunyaka wam wesibini, ndinokubambisa i-180 yeedola inyanga.
Kananjalo awunakuthatha ezi zibalo njengento eyinyani ngenani kwaye ingashukumi. Ayisiyiyo kuphela ukuba ndiye ndaphazama ngexesha elithile (ndiyayicinga loo nto, kodwa ngokuqinisekileyo umntu uya kuba nakho ukundilungisa kumagqabaza) kodwa, njengoko benditshilo, Ixabiso eliguqukayo leBitcoin kunye nesantya okanye ukucotha kokunyuka kwayo okanye ukuhla kwayo kubunzima kakhulu.
Kwelinye icala, i-Intanethi igcwele amaphepha anezibalo ezingekho ngqiqweni. Khumbula ukuba uHashflare ubonelela ngekhomishini enkulu kwabo bazisa abathengi abatsha. Kwaye akukho maphepha afanayo enziwe yinkampani ngokwayo. Ngokucacileyo, akukho nalinye kula maphepha okanye iibhloko eziza kubonelela ngoqikelelo olungenathemba.
Yonke into icebo
Oku kungaphezulu komdlalo kunesayensi ngqo. Ayifanelanga kuthathwa ngenye indlela okoko nje kungenakwenzeka ukubona kwangaphambili ukuvela kwee-cryptocurrensets. Ngapha koko, akunakwenzeka ukuba ubone kwangaphambili ukuvela kwenkampani enikezela ngenkonzo ngokwayo. Xa uqesha inkonzo unyaka, kunokwenzeka ukuba ucinge ukuba inkampani iyakuhlala isebenza kwaye ikwimo entle emva kwelo xesha. Kodwa kwihlabathi izinto azisoloko ziqinile njengoko besingathanda.
Kodwa masifike kwinqanaba, sinethemba. Usenokuba uyayiqonda loo nto Ukucwangciswa kwesicwangciso oziqeshileyo kubaluleke kakhuluKuxhomekeke kwinto ofuna ukuyenza okanye ukuyiphumeza, eya kuthi, ewe, ufumane eyona mbuyekezo iphambili kutyalo-mali lwakho. Ukuba unomdla kwimbono yam, ndiya kuphakamisa isicwangciso endicinga ukuba sinomdla kakhulu. Amaqokobhe enathi:
Phinda utyale kwi-hashrate engaphezulu yonke into onokuyenza okanye usebenzise izibonelelo ozifumanayo xa usenza umgodi. Kwiinyanga ezimbini okanye ezintathu zokugqibela zonyaka zigcine izibonelelo ukuba ivelisa.
Kananjalo jonga into engekho intle kangako
Ndikuxelele izinto ezilungileyo nezingalunganga. Kukho izinto eziguquguqukayo, akukho nto iqinisekileyo ngekhulu leepesenti. Njengazo zonke iinkampani, kuhlala kukho abathengi abangonelisekanga. Banokuba ngamampunge okanye banokuba banyanisile. Sukuvala ukuhluza uhlolo kuba unomdla wokwenza inzuzo. Zolile, sihlobo. Vavanya yonke into emva koko uthathe isigqibo kunye nobulumko obuyimfuneko. Njengoko bekusoloko kutshiwo kwaye kungaze kwanele, ungaze utyale imali ongenakukwazi ukuyilahla.
IHashflare inabagxeki abaninzi kwaye bakhona iingxelo ezisekwe kuvavanyo nakwizimvo. Kodwa le yinto iinkampani ezimbalwa ezikwi-Intanethi ezihamba nazo. Kananjalo akufuneki uchukumiseke kuba ujonga "Hashflare uyanya" Kuyo nayiphi na injini yokukhangela uya kufumana izikhalazo ezininzi ngokungathi ujonge nayiphi na enye kwezi zinto zikhankanywe ngasentla. "IAmazon iyanya", "I-Bitcoin iyanya" y "Foo uyanya" inokuba sisiqalo kuphela ukubona ukuba abathengi abanganelisekiyo bathini okanye nokuba yintoni na ukhuphiswano olwenzileyo ukunciphisa amandla alo. Akukho ndlela yokwazi inyani ngale ndlela okanye ukuba siza kuhamba njani. Okwangoku, kulungile ukuba ujonge uphononongo kuba luyanceda ekuthinteleni nasekuzibambeni kufuneka uphephe ukutyala imali ngobuhlanya.
Sele nditshilo, ukumbiwa kwamafu ayisiyo panacea yokufumana ubutyebi okanye ibhalsam yezilwanyana zasendle esiguqula sibe zizigidigidi ze-crypto. Imigodi yefu lutyalo-mali yintoni, nge isicwangciso esaneleyo, ungasinika i- ukusebenza umdla Yimali eyinkunzi ethi, ukuba ayenzi enye into, ekuphela kwento enokuyiphumeza kukuzithoba. Ukufumana i-10% yokubuya komnatha kukuphumelela kunye nenjongo efanelekileyo. Ukuba oko kwamkelekile kuwe, zama ukumbiwa kwamafu kwaye wonwabe. Ukuba intsebenzo iphezulu, masivuyisane nathi. Kwaye ukuba akunjalo, uyazi, sukunyanzela ngaloo ndlela. Mhlawumbi ukuthenga i-crypto esempilweni ngekamva elihle kunokukunika ukoneliseka ngakumbi.
Ewe, ukuba ulifundile eli nqaku de kube sekupheleni, kungenxa yokuba umxholo unomdla kakhulu kuwe. Mhlawumbi kuya kufuneka uzame ngokwakho ngokuqala ngokutyala imali ngobulumko.
I-Hashflare, iwebhusayithi esemthethweni
IiHashcoins, Inkampani yabazali yeHashflare
Isibhengezo senkonzo kunye nentambo kwi BitcoinTalk
1 Ingcamango entsha yezemigodi
3 Isebenza njani iHashFlare
4 Yima, kutheni le nto iHashflare ingezimbiwa?
5 Hambisa isantya sakho kumachibi ahlukeneyo
6 Ndingafumana malini?
7 Yonke into icebo
8 Kananjalo jonga into engekho intle kangako